Eritreritr'i hery - Namana Serasera.org
hery 22/03/2010 08:01
Resaka baiboly: hoy rakapy "7 andro ahoana no nahariana izao tontolo izao?" sy hoe "mamafy lainga ny baiboly"
Hapetrako eto ity resaka ity izay efa nataoko tatsy amin'ny forum ihany Jereo eto satria ity eritreritra mandalo ity ny ahy dia miparitaka any amin'ny Facebook any.
Ny olana GOAVANA indrindra na ho an'ny mpanao siansa na ho an'ny mpino dia ny mandray ny baiboly ho boky ara-tantara. Izany hoe boky milaza tantara marina (livre historique). Raha vao mandray ny baiboly ho filazana ZAVA-MISY ianao dia diso. Ary tsy omeko tsiny raha hilaza hoe mamafy lainga ny baiboly, milaza zavatra mifanohitra ny baiboly sns...
Ny baiboly dia tsy bokin-tantara fa bokim-pinoana.
Ny olona nanoratra ny baiboly dia tsy nieritreritra ny hilaza izay TENA NITRANGA TANTERAKA (fotoana, olona mpandray anjara sns.) Isika no diso fandray mandray ny baiboly ho tantara. Fa ny olona nanoratra ny baiboly dia nieritreritra ny baiboly ho bokim-pinoana. Hampitàna ny finoana amin'ny mpiara-belona aminy. Hilazana hoe Andriamanitra no nahary izao tontolo izao. Tsy nieritreritra mihitsy izy hoe hisy olona handray ny boky soratany ho zavatra nisy marina ara-bakiteny, fa raha izany dia tsy nanoratsora-poana izy, fa ny noeritreretiny dia hoe mba hahay mandray ny hevi-dalina avy amin'ny kisarisary lazainy ny olona. Ny baiboly dia boky mahafinaritra, feno fanoharana, hevitra mifono, poezia, angano, tahaka ny bokin'ny fiarahamonina misy rehetra... fa ny hevitra fonosiny no tena tiany hasongadina.
Ka raha vao miresaka pitsopitsony ianao dia very amin'ilay zavatra tena fonosiny.
Afaka miova amin'izay izany izao ny fomba fijerinao an'io tantara momba ny nahariana izao tontolo izao io. Raha miteny izy hoe nohariana tao anatin'ny 6 andro ary ny andro faha 7 Andriamanitra niala sasatra, dia tsy midika velively hoe 24 heures x 7 akory izay. Ary tsy midika hoe iza no namboarina voalohany sns... fa mifono zavatra lalina kokoa noho izany, ary ny voalohany indrindra amin'ireo dia hoe Andriamanitra no nahary izao tontolo izao ary vokatry ny fitiavany no nahariany azy.
Midira raha hametraka hevitra
6. hery 23/03/2010 07:50
Mirananirina> Tsy hoe tsy mitombona akory fa mila raisina amin'ny contexte ilay izy fa tsy raisina ara-bakiteny.
Olombelona niaina tamin'ny fotoanany no nanoratra ny baiboly. Nanana ny toetrany, ny fihetsehampony. Rehefa nahita ny zavatra niainan'ny olona manodidina azy izy tamin'izany fotoana nanoratany izany dia misy fiantraikany amin'ny zavatra soratany ny zavatra iainany. Eritrereto hoe gidragidra be ny manodidina, niaina tao anaty fahalotoana sy fahotana tsy laitra tenenina. Tsy mety anarina amin'ny teny tsotra intsony. Ny hafatra anefa tsy maintsy ampitaina dia ilay hoe "Mibebaha ianareo, mialà amin'ny fahotanareo ary miverena amin'izy Tompo". Koa raha tsy tafita amin'ny fomba tsotra ny hafatra dia tsy maintsy ampitaina amin'ny alalan'ny fampitahorana, ary ny tena atahoran'ny olona dia ny fahafatesana, koa dia lazaina mihitsy hoe tsy maintsy ho faty ianareo raha tsy manota ary Andriamanitra no manjary lasa hoe mpamono.
Mazava ho azy, rehefa mamaky an'io ianao amin'izao fotoana izao dia tsy raisinao ara-bakiteny hoe mpamono olona Andriamanitra satria mifanohitra amin'ny maha fitiavana azy izany. Fa ny hafatra tiana hampitaina no raisinao dia ilay hoe Mibebaha, mialà amin'ny fahotana ary manatona azy Tompo
5. Mirananirina 23/03/2010 07:36
aleo hazavaiko ny teniko oh: nitady olona teo aminy Aho hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita;koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako; ny afon'ny fahatezerako no handaniako azy; ary hatsingeriko ho eo an-dohany ihany ny fanaony*, hoy Jehovah Tompo.[Heb lalana]" (Ezekiela 22:30-31).ankehitriny,amiko Andriamanitra dia tsy mpamono olona ,nefa betsaka ny lazaina ao aminy baiboly fa mamono olona izy..izay tsy manaraka ny didiny sns....
4. Mirananirina 22/03/2010 16:41
ka rehefa nampianarina ny baiboly taloha dia manaraka ambokiny ny zavatra hambarany ao,izao fa mahatsapa fa misy ny tsy mitombona.ary misy tena marina sy mitombona(mahagaga fa nampianatra katesizy aho tamin'izany )
3. vale 22/03/2010 15:44
Hery> hay!!!, azoko tsara !! merciii
2. hery 22/03/2010 13:05
vale> Mila mitandrina rehefa miteny hoe tsindrimandrin'Andriamanitra ny baiboly sao dia lasa mitovy amin'ny Silamo izay miteny hoe dictée avy amin'i Allah ny Coran.
Ny handraisana ilay hoe tsindrimandry dia hoe notsilovin'ny Fanahy Masina. Ilay fitsilovana akory tsy midika hoe dictée. Fa notsilovin'ny Fanahy Masina ohatra ry zareo hahalala hoe Andriamanitra no nahary izao tontolo izao, dia avy eo izy mamorona tantara hahafahany milaza izany amin'ny olona manodidina azy. Jereo tsara fa mitombona ilay hoe tsilovin'ny Fanahy Masina na dia tsy avy amin'ny Fanahy Masina aza ilay détails historiques. Ny Fanahy Masina izany tsy niteny tamin'ny mpanoratra hoe ataovy 7 andro no namoronana an'izao tontolo izao, fa hoe lazao fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, ary tao anatin'ny fitiavana ny olombelona no antony namoronany izany.
1. vale 22/03/2010 10:47
Hery> tohizo fa tena mahaliana satria ny hevitry ny maro anie mahataka-davitra eee, za lo tena saro-piaro be raha vao tenenina fa diso ny voalaan'ny Baiboly, satria araka ny Boky mpaminaniana azy dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ny teny voarakitra ao, ary ny fanahy masina no mampiteny ireo mpaminany, sy mpanoratra, araka ny maha-croyante ahy, et même pas pafaite hein, fa mivila ihany satsia nofo ihany, fa mino zaho an!!